Asa-tanana miaraka amin'ny fingotra EVA - Asa-tanana | Asa-tanana (Pejy 2)
Asa-tanana miaraka amin'ny fingotra EVA
Ny fananana tsoratadidy dia tena zava-dehibe mba hahatsiarovanao ny toerana tsy itsahanao mamaky intsony, ataovy manokana amin'ny ravina manoratra teny mahafinaritra.
Mpihinana vorona miaraka amina kapoaka voaverina
Mifalia amin'ny fanodinana sakafo am-bifotsy roa hanamboarana mpamorona vorona, miaraka amin'ny fitaovana vitsivitsy ary mora atao.
Ireto kitrokely mozika ireto dia tena falifaly sy mahafinaritra. Amin'ny fingotra kely eva dia afaka manamboatra zavamaneno tsy mampino ho an'ny ...
Saron-tava tany am-boalohany ho an'ny karnavaly
Manana fomba hafa hanamboarana asa-tanana maska ​​karnavaly izahay. Ho tianao ny fomba haingana, tany am-boalohany ary mora atao.
Kitapo fitehirizana gel
Izahay dia nanamboatra kitapo hitehirizana ny gel, tena tany am-boalohany ary nahafinaritra naka ny toetranao tianao indrindra ary nitondra ny famonoana otrikaretina.
Emoji tia an'i Eva rubber
Iza no tsy tia emoji? Aza adino ity asa tanana tsara tarehy ity mba hanao emoji miaraka amin'ny masom-pitiavana.
Fahatsiarovana voninkazo Eva
Atorinay anao ny fomba fanaovana token voalohany hamoronana fahatsiarovana mahatalanjona ahafahan'ny fianakaviana iray manontolo milalao sy mifalifaly.
Peratra voninkazo misy fingotra eva hatao amin'ny ankizy
Aza adino ity asa-tanana mora ity hamoronana peratra voninkazo misy fingotra eva, tian'ny ankizy ny mamorona ny kojakojany manokana!
Puzzles Geometric Popsicle Puzzles
Aza adino ireo hevitra ireo mba hanao piozila tsotra ho an'ny ankizy kely misy kapa eva sy hazo polo.
Boaty miendrika unicorn
Ianaro ny fomba fanamboarana boaty iray azonao ampiasaina sy ahodina ho lasa singa tsy ampoizina miendrika unicorn. Mahafinaritra sy tany am-boalohany.
Sarimihetsika fiarovana ho an'ny ankizy
Ianaro ny fomba fanaovana efijery miaro ho an'ny ankizy manana fitaovana tsotra sy miaraka amin'ny firavaka vita amin'ny kofehy eva tany am-boalohany. Tian'izy ireo ny mitondra izany na aiza na aiza.
Tongasoa majika miaraka amin'i Eva Rubber na baoritra
Manao ahoana daholo! Amin'ity asa tanana ankehitriny ity dia hataonay vita amin'ny majika eva ity tongolo majika ity, mety indrindra amin'ny ...
Kitapo vatomamy miendrika unicorn
Ianaro ny fomba fanaovana asa tanana mahafinaritra roa hitahirizana vatomamy. Kitapo sy boaty iray misy fantsona baoritra miendrika unicorn.
Karnaval EVA solomaso hatao amin'ny ankizy
Aza adino ity asa tanana mora atao amin'ny ankizy ity. Izy ireo dia solomaso vita amin'ny kodiarana EVA mety tsara amin'ny Karnavaly ... ary tian'izy ireo ny manao azy!
Pendant fiara amin'ny fetin'ny mpifankatia
Aza adino ity pendant fiaran'ny Fetin'ny mpifankatia ity. Mora be ny manao azy ary ho tsara tarehy toy ny haingon-trano na aiza na aiza itiavanao azy.
EVA mpiambina ivelan'ny tany
Aza adino ity asa tanana mahafinaritra ity izay misy tompona naoty miendrika vahiny izay hanampy anao hitahiry naoty mampihetsi-po indrindra.
Mouse totozy mahatsikaiky EVA
Aza adino ity asa tanana tsara tarehy ity mba hanaovana totozy fingotra EVA mety ho an'ny ankizy. Araho ny dingana ary ho hitanao fa mora izany!
Stella peratra miaraka amin'ny fingotra EVA
Aza adino ity asa-tanana ity mba hanamboarana peratra fingotra EVA. Mety tsara raha fanomezana na ho anao, dia ho tena kanto!
Saron-tava mahatsikaiky ho an'ny Taom-baovao
Nandritra ny alina farany tamin'ny taona dia nanomana an'ity asa tanana mora be ity izahay ho an'ny ankizy. Aza adino ny saron-tava ny Taom-baovao!
Voninkazo voninkazo «Merry Christmas» haingana sy mora
Mora be ny manao garlandy ity, mila fitaovana vitsivitsy ianao ary afaka handravaka bebe kokoa ny fetin'ny Krismasy, Krismasy sambatra!
Haingo hazo krismasy hahantona
Aza adino ity asa tanana hazo Noely ity hahantona vita amin'ny fingotra EVA. Tena mora izy io ary maharitra minitra vitsy monja.
Tady volomparasy EVA volomparasy
Tsotra tsotra izao ity fehin-tànana vita amin'ny kofehy EVA ity ary afaka omenao izany afaka minitra vitsy. Efa fantatrao ve izay homenao azy?
Biby masiaka eva
Raha tianao na ny zanakao ilay biby goavam-be, dia aza hadino ity asa tanana mora atao amin'ny ankizy ity.
Kintana mitifitra miaraka amina tsorakazo popsicle sy fingotra eva
Ankehitriny efa manakaiky ny Noely dia aza adino ity asa tanana mora atao amin'ny ankizy ity: kintana fitifirana tsara tarehy! Ho tianao izany!
Fehin-tànana am-po miaraka amin'ny fingotra EVA
Aza adino ity asa-tanana mora ity hanamboarana fehin-kibo fo vita amin'ny kodiarana EVA, mora be tokoa izany ary azon'ny ankizy omena azy io.
Mpanantona varavarana: tsy misy fanitsakitsahana
Ity asa tanana mihantona varavarana tsy hidirana ity dia ho an'ny tweens sy ny tanora ... ary mora be ny manao azy!
Fehin-tànana fingotra EVA tsara tarehy
Ny fanaovana brasele dia mora be ary vao mainka aza rehefa manamboatra azy amin'ny fingotra EVA ianao. Izahay dia manome anao ny dingana hamoronana haba tsara ho anao na hanomezana ho fanomezana.
Maso mahatsikaiky miaraka amin'ny fingotra EVA
Aza adino ity asa tanana ity miaraka amin'ny maso mampihomehy vita amin'ny fingotra eva izay zatra milalao ary mihomehy miaraka amin'ireo ankizy.
Ireto voninkazo vita amin'ny kodiarana eva tsara tarehy ireto dia tena mora ny manao azy ary mety tsara hatao amin'ny ankizy. Vetivety dia ho vonona handravaka azy ireo ianao!
Afisy manokana miaraka amin'ny fingotra eva
Ity afisy namboarina manokana ity miaraka amin'ny fingotra eva dia mety indrindra ho an'ny ankizy, ny manao azy manokana ary, ohatra, mametraka azy eo am-baravaran'ny efitranony.
Amboary ny lalao XNUMX amin'ny fingotra Eva matevina
Ity lalao tic-tac-toe ity dia tena mora atao ary ny ankizy dia ho tia milalao zavatra noforoniny ho an'ny tenany ihany koa.
Tora-po miendrika fo mora
Ity hajia miendrika fo ity dia tena mora atao amin'ny ankizy ary ho faly izy ireo amin'ny fanaovana izany sy hahita ny valiny.
Tsoratadidy vita amin'ny kofehy EVA miendrika Starfish
Mora tokoa ny manao io tsoratadidy io ary hanana hazandrano kintana foana eo anelanelan'ny pejy amin'ireo famakianao ankafizinao.
Tehirizo ny zava-drehetra miendrika panda misy fingotra EVA
Aza adino ity zavatra mora vita tanana sy tena vita tanana ity, mpiambina rehetra miendrika endrika panda io! Mahafinaritra izany!
Fonon-tànana misy fehikibo EVA: alina feno kintana
Raha te hanana telefaona finday mora vidy ianao, dia tsy hadino ity asa tanana vita amin'ny kodiarana EVA ity, tranga finday "alina feno kintana"!
Manantona sary miendrika antokon-kintana
Te hijery antokon-kintana amin'ny alina ve ianao? Mahafinaritra ireo kintana ary azonao atao izao ny manamboatra kintana fitehirizana anao.
Haingo ho an'ny pensilihazo EVA
Aza adino ireo firavaka pensilihazo ireo! Mora be ny manamboatra azy ireo ary ny ankizy dia ho tia ny manao azy miaraka aminao. Efa nieritreritra an'izay hatao ve ianao?
Fomba fanaingoana sy fandokoana ny vatonao
Manana vato voatahiry avy amin'ny toerana manokana ve ianao ary tsy fantatrao raha hanome azy ireo fifandraisana manokana? Sa te hanao asa tanana amin'ny ...
Taratra mazika miaraka amin'ny fingotra Eva
Ireto wands majika ireto dia mety hilalao amin'ny ankizy ary ny zavatra tsara indrindra dia ny ahafahan'izy ireo manao azy miaraka aminao, ho tiany izy ireo!
Eva lollipops vita amin'ny fingotra hatao amin'ny ankizy
Aza adino ity asa tanana mora be ity, izay azonao atao ao anatin'ny fotoana fohy ary ho tian'ny ankizy ... eva lollipops!
Medaly Eva fingotra hatao amin'ny ankizy
Ireto medaly Rubber Eva hatao amin'ny ankizy ireto dia tena mora ary koa, izy ireo dia mety ho tompon-daka tamin'ny fanatanterahana izany tsara!
Windmill vita amin'ny baoritra eva sy baoritra taratasy fidiovana
Fanazavana ny fomba fanamboaran-drivotra misy vovoka eva amin'ny alàlan'ny fanodinana fitaovana mora azo ao an-trano. Mety hatao amin'ny ankizy.
Trondro vita amin'ny kofehy Eva sy taratasy hamboarina amin'ny ankizy
Ny trondro no biby mahatsikaiky sy mora indrindra amin'ny asa tanana. Tian'ny ankizy izy ireo ary ...
Mampiasà tetrabrik hanamboarana pensilihazo amin'ny fingotra eva
Fanazavana sy fizotra amin'ny fomba fanodinana tetrabrik hanamboarana pensilihazo amin'ny kapoaka eva miendrika imp. Tena tsara ny manaingo manokana ny biraonao!
Ity herinandro ity dia ny 14 Febroary, andron'ny mpifankatia na Andron'ny mpifankatia. Satria te-hanome fanomezana foana isika, ...
Ny mpitsabo mpanampy dia manana asa tena tsara tarehy hikarakara antsika sy hahafantatra ny fahasalamantsika. Amin'ity lahatsoratra ity dia hampianariko anao ny fomba fanaovana an'ity mpitsabo mpanampy ity avy amin'ny Mianara manao ity mpitsabo mpanampy eva tonga lafatra ity ho an'ny olona iray natokana ho an'io asa io, azonao atao ny mampiasa azy io ho toy ny brooch.
Fanomezana ho an'ny fetin'ny mpifankatia sy ho an'ny finamanana. Firavaka unicorn
Ianaro ny fomba fanaovana an'ity firavaka ity amin'ny Andron'ny mpifankatia na ny andro fitiavana sy fisakaizana mba hahagaga olona iray tena miavaka amin'ity andro ity.
Ianaro ny fomba fanaovana an'ity renirano Santa Claus ity handravaka ny tranonao na ny kilasinao amin'ny Krismasy, tonga lafatra ny fanaovana amin'ny ankizy satria mora be izany.
Mpamosavy Halloween miaraka amin'ny voatavo. Asa-tanana hatao amin'ny ankizy
Ianaro ny fomba fanaovana an'io mpamosavy io miaraka amin'ny voatavo hankalazana ny Halloween sy handravahana ny tranonao na ny varavaran'ny kilasinao any an-tsekoly, tsara ny manao amin'ny ankizy.
Fomba fanamboarana vorona fingotra eva miaraka amina fitaovana fanodinana
Ianaro ny fomba fanaovana an'ity vorona fingotra eva ity amin'ny alàlan'ny fanodinana ny fidiovana na horonan-taratasy an-dakozia, mety tsara handravahana ny zoron'ny tranonao rehetra.
Lolo lolo fingotra Eva
Fampianarana hanamboarana lolo lolo vita amin'ny ravina eva, famenon-javatra mety indrindra ahafahantsika manao ny tenantsika handravaka rindrina na zoro
Souvenir ho an'ny fandroana zaza na batisan'ny eva vita amin'ny fingotra
Ianaro ny fomba fanaovana an'ity souvenir tonga lafatra ity hankalazana ny batisan-jaza na fandroana zaza ary gaga amin'ny vahiny amin'ny zavatra miavaka.
Fomba fanamboarana boaty finday miendrika bitro miaraka amina eva na rubber rubber
Ho hitantsika ny fomba fanamboarana boaty finday miendrika bitro miaraka amina eva na foam rubber, azo ampiharina sy tsara hitafy ity Paska ity.
DIY - kahie Unicorn MIARAKA PATTERNS - Tsikelikely
Mampianatra anao ny fomba hamoronana kahie unicorn aho amin'ity fampianarana ity, miaraka amina lamina hahafahanao mandika na manonta azy ireo ary afaka handravaka ny kahie anao manokana.
DIY - Ahoana ny fomba fanaovana cupcakes vita amin'ny kodiarana eva tsikelikely
Ato amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny fomba fanamboarana cupcakes vita amin'ny kodiarana eva izay ho haingon-trano sy ho an'ny ankizy kely.
Superhero Bookmark miaraka amin'ny hazokely hazo
Ianaro ny fomba fanaovana an'ity tsoratadidy maherifo ity amin'ny tehina hazo, tonga lafatra hanamarihana ireo bokin-tsekoly zanatsika
Tanana pensilihazo ho an'ny ankizy vita amin'ny fingotra eva na fomy
Ianaro ny fomba fanaovana ity pensilihazo ankizy ity miaraka amin'ny fingotra eva na fomy, tonga lafatra handravahana ny latabatr'ireo kely ao an-trano.
Rainbow unicorn handravaka ny asa-tanan'ny zanatsika
Ianaro ny fomba fanaovana an'io avana tonga lafatra io ho an'ny fotoana manokana na handravaka ny asa-tanantsika.
Lion bookmark vita amin'ny rubber vita amin'ny eva ho an'ny ankizy
Mianara manamboatra an'ity tsoratadidy ity amin'ny endrika liona misy fehikibo eva izay hahafaly ny ankizy ao an-tranonao handravaka ny bokin'izy ireo.
Fo hanome ny andron'ny mpifankatia na finamanana
Ianaro ny fomba fanaovana izany fo ny andron'ny mpifankatia izany hanome amin'ny fetin'ny mpifankatia na ho an'ny finamanana. Fanomezana tany am-boalohany sy tonga lafatra ho an'ity daty ity.
Eva penina fingotra hanome ny andron'ny finamanana
Ianaro ny fomba fanaovana ity pensilihazo vita amin'ny kodiarana eva ity miaraka amin'ny orsa mba hanomezana ny andron'ny finamanana sy ny fitiavana olona iray tena manokana
Ahoana ny fomba hanaovana tsoratadidy ladybug rubber eva ho an'ny ankizy
Ianaro ny fomba fanaovana an'ity bookmark eva ity amin'ny endrika ladybug, tonga lafatra ho an'ireo ankizy kely ao an-trano handravaka ny bokin'izy ireo.
Fomba fanamboarana alika fingotra eva handravahana ny pensilihazo
Ato amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny fomba fanamboarana alika fingotra eva hahafahanao mandravaka ny pensilihazo sy ny peninao ary ataovy mahafinaritra sy tena izy ireo.
Ahoana ny fomba hanaovana saribakoly matryoshka na rosy eva Rosiana
Mianara manamboatra matryoshka rosiana na saribakoly vita amin'ny fingotra eva amin'ny dingana vitsivitsy ary ny vokany dia io orisialy io, tsara haingo.
Karatra fo ho an'ny Andron'ny mpifankatia miaraka amin'ny taratasy fanoratana
Ianaro ny fomba fanaovana an'ity karatra Valentine ity amin'ny fampiasana sary nohetezana sy fitaovana fanodinana asa amin'ny asa hafa.
Penguin vita amin'ny kofehy Eva handravahana ireo asa-tananao Krismasy
Ianaro ny fomba fanaovana an'ity pengazy eva krismasy ity handravahana ireo tetikasanao toy ny karatra, boaty, fanomezana ...
Ornament hazo krismasy masona
Ianaro ny fomba fanaovana an'ity firavaka ity amin'ny hazo krismasyo amin'ny endrika fonon-tànana na mite mba hampifanaraka azy amin'ny haingon-trano ao an-tranonao.
Andriamby misy hazo Noely handravahana ny vata fampangatsiahana anao
Ianaro ny fomba fanaovana an'ity andriamby Krismasy ity miaraka amin'ny hazo ary aingam-panahy avy amin'ny lanezy misy lanezy, mety tsara ho an'ny lakoziananao amin'ireo daty ireo
Tena mora eva na foza raharaha mozika vita amin'ny fingotra ho an'ny ankizy
Ianaro ny fomba hanaovana an'ity tranga eva vita amin'ny mozika entanin'ny mozika ity, mety indrindra ho an'ireo mpankafy mozika na foam-bolo
EVA na fonosana vita amin'ny fingotra mihosin-javatra amin'ny endrika totozy ho an'ny pensilihazo
Ianaro ny fomba fanaovana an'ity tranga ity vita amin'ny kofehy eva, mety hametrahana pensilihazo miloko na hitazomana ny tsiambaratelo tsara indrindra an'ny ankizy
Tsoratadidy bokotra sy bokotra ho an'ny ankizy Eva
Ireto bookmark ho an'ny ankizy ireto dia mety handravaka ny bokinao, vita amin'ny fehikibo vita amin'ny fingotra sy bokotra, tena tany am-boalohany ho an'ny latabatrao.
Mpanoratra mpamosavy eva ho an'ny Halloween
Ianaro ny fomba fanaovana an'ity tsoratadidy ity amin'ny endrika mpamosavy amin'ny kifafafa, mety handravahana ireo bokinao amin'ny Halloween na amin'ny fety mahatsiravina rehetra.
Karan-doha Meksikana hankalaza ny Andron'ny Maty na Halloween
Ianaro ny fomba fanaovana ireny karandoha ireny hankalazana ny Andron'ny Maty na Halloween ary handravaka ny tranonao ka mampatahotra sy mampatahotra izany.
Pac-Man Pac-Man. Tsoratadidy ho an'ny ankizy manana fingotra eva
Ianaro ny fomba fanaovana an'ity tsoratadidy ity miorina amin'ny pacman na pac-man ho lalao video hatramin'ny taona 80, azo antoka fa ho tianao ny manao azy.
Tags tags ho an'ny scrapbooking. fo
Ianaro ny fomba fanaovana ireo labozia na tag ireto ho an'ny tetikasanao amin'ny scrapbooking amin'ny endrika fo. mijery tsara ny hevitrao izy ireo.
Clips voaravaka voninkazo fingotra eva
Clips sy stationery tiako. Isaky ny mandeha mankany amin'ny fivarotana tampon-trano aho ary mividy ...
Kitendry key Pokeball. Pokemon go
Ianaro ny fomba fanaovana an'ity keychain ity amin'ny endrika pokeball avy amin'ny pokemon mba handravahana ny lakilanao na kitapo ary hampideradera ny asanao any am-pianarana.
Tombo-kase an-trano ao anatin'ny dimy minitra
Amin'ity asa tanana ankehitriny ity dia ho hitantsika ny fomba fanaovana hajia vita an-trano ao anatin'ny dimy minitra ary vitsy ny fitaovana.
Ahoana ny fomba hanaovana paosy totozy amin'ny fingotra eva
Amin'ity lesona ity dia manome anao hevitra aho hamoronana pad mouse miaraka amin'ny rubber rubber. Atoroko anao ny tsikelikely mba hahafahanao manao azy mora foana.
Eva peratra voninkazo fingotra
Ianaro ny fomba fanaovana ireo peratra voninkazo fingotra tena mora sy tsara tarehy amin'ny fotoana rehetra. Atambaro izy ireo na izany aza tianao ary manaova maodely isan-karazany.
Tena hala eva fingotra tena mora
Ianaro ny fomba fanamboarana ireo hala vita amin'ny kodiarana eva handravahana ny fetinao Halloween na horohoro. Mora be ny manamboatra azy ireo ary tena tsara tarehy.
Mianara manao an'ireto saribakoly na saribakoly rantsan-tànana ireto miaraka amin'ny fingotra eva izay ho tian'ny ankizy kely ao an-trano Izy ireo dia tena tany am-boalohany sy mora.
Raha tianao ny voninkazo, ho tianao ity tsikelikely ity, hasehoko anao ny fomba fanaovana voninkazo baoritra sy Eva Gum, handravahana ny tranonao.
Akanjo totozy miendrika vorondolo
Ato amin'ity lesona ity dia asehoko anao ny fomba fanamboarana pad totozy iray ho an'ny solosainao amin'ny endrika vorondolo. Misaotra ireo modely fa ho mora be izany.
Saribakoly rantsantanana. Saribakoly jellyfish
Ianaro ny fomba fanaovana an'io saribakoly na saribakoly rantsantanana io ho tonga lafatra hitantara amin'ny ankizy ny tantaran'ny ranomasina ary tena mora atao.
Tsoratadidy momba ny biby. Sahona tena mora
Ny tsoratadidy vita amin'ny kodiarana Eva dia mora atao ary tian'ny ankizy izy ireo. Amin'ity indray mitoraka ity ianao ...
Vilany misy kapsily kafe sy fingotra eva
Ianaro ny fomba hamerenany ny kapsula kafe ary avadiho ireo ho lasa vilany mahafinaritra.
Eva pendant watermelon Eva
Ianaro ny fomba fanaovana ity pendant watermelon tonga lafatra ity ho an'ny ankizy manana eva foam. Azo antoka fa hahafinaritra be izy ireo ary manome fanomezana tena tsara.
Fiara tsoratadidy vita amin'ny fingotra Eva
Ianaro ny fomba fanamboarana ireo tsoratadidy vita amin'ny kodiarana eva tonga lafatra ho an'ny ankizy miendrika stroller. Tena tian'izy ireo izy ireo noho ny bokiny.
Ball amin'ny lohataona
Ianaro ny fomba fanaovana ity haingo miendrika baolina ity amin'ny lohataona. Mahafinaritra ny mandravaka ny efitranonao, tsy azonao hadino ireo dingana tsikelikely!
Trondro fingotra eva ho an'ny ankizy
Ianaro ny fomba fanaovana ireny trondro fingotra mahafinaritra ireny. Izy io dia asa-tanana mety indrindra atao amin'ny ankizy ary mahafinaritra ny valiny !!!
Eva moron-dranomasina vorondolo
Ianaro ny fomba fanaovana coaster zaza lavorary ho an'ny ankizy kely amin'ilay zavatra miendrika vorondolo vita amin'ny rubber amin'ny eva.
Tsoratadidy fingotra zazalahy sy zazavavy Eva
Ny tsoratadidy eva na foam vita amin'ny fingotra dia tsara hanakaikezana ny ankizy amin'ny tontolon'ny famakiana. Fantatro…
Eva na rojo vy keychain. Birdie
Androany aho dia hampianatra anao ny fomba hanaovana ity keychain eva na foamy ity amin'ny endrika vorona. Lavorary…
Tsoratadidy fingotra Eva. sahona
Tian'ireo ankizy ny tsoratadidy. Ianaro ny fomba fanaovana an'ity sahona tsara tarehy ity handravahana ny tantaranao sy ny kahie.
Sifotra mpihazona pensilihazo EVA
Ity sifotra mitazona penina ity dia fitaovana tsara ho an'ny ankizy kely ao an-trano handravaka ny fitaovany an-tsoratra rehetra any am-pianarana.
Eva na raozy vita amin'ny kofehy mamoaka vovoka
Ianaro ny fomba fanaovana ireny raozy vita amin'ny kodiarana eva ireny amin'ny fomba tsotra ary ny vokatra dia ho mahavariana.
Pendant miaraka amin'ny fingotra eva
Miarahaba anao indray! Azo antoka fa manana ilay kely amin'ny trano tia manao firavakao ianao, raha ...
Tsoratadidy vita tao anatin'ny 3 minitra
Tutorial hanamboarana tsoratadidy ao anatin'ny telo minitra. Lavorary hatao amin'ny fitaovana fanodinana.
EVA fehiloha misy sofina
Lahatsoratra na tutorial DIY hanamboarana fehiloha EVA mahafinaritra amin'ny sofina.
Fanjaitra boky vita amin'ny fingotra EVA
Lahatsoratra DIY hanamboarana tsoratadidy tsara tarehy sy mahafinaritra miaraka amin'ny endrika biby mampiasa fingotra EVA sy tsapa.
Boaty DIY vita amin'ny fingotra EVA
Andininy momba ny fanovana ny ravina fingotra eva ho boaty hitahirizana ireo karazana zavatra rehetra. Fampianarana mora mety ho an'ny rehetra.
Fonosana vita amin'ny fingotra eva
Amin'ity faran'ny herinandro ity ao amin'ny CraftsON izahay dia manome fampianarana anao momba ny fomba fanamboarana fonosana tsotra avy amin'ny ravina vita amin'ny kofehy EVA.
Bateria misy hevitra hampiasana indray ny sombin-tsolika eva kely
Baterin'ny hevitra mahafinaritra hampiasaina indray amin'ny kapoaka vita amin'ny vovoka eva izay ananantsika foana rehefa manao asa hafa amin'ity fitaovana ity isika.
Lahatsoratra ho an'ny haingon-trano amin'ny fety amin'ny lohataona. Fampianarana hanamboarana voninkazo misy fo vita amin'ny rubber vita amin'ny eva.
Afaka milahatra amin'ny fingotra eva
Tin-tsipika miloko maro loko. Manova fantsom-batana amin'ny alàlan'ny fanodinana azy amin'ny kofehy eva misy loko samihafa hanomezana azy fiainana faharoa na handravahana zorony kely.
Fonosana tsotra ho an'ny fanomezana
Lahatsoratra momba ny fomba fampiasana rubber vita amin'ny eva hanamboarana fonosana iray am-boalohany sy tsara tarehy. Fonosy amin'ny fomba manokana ny fanomezam-pahasoavanao, satria ny tsiro tsara dia ao amin'ny antsipiriany.
Voninkazo vita amin'ny fingotra eva
Lahatsoratra momba ny fanaovana maodely Eva rubber amin'ny alàlan'ny fametahana hafanana amin'ny basy hafanana. Ao amin'ny lahatsoratra dia ho hitantsika ny fomba fanaovana voninkazo tsotra sy ny fomba fandokoana azy amin'ny gradient.
Fehin-kibo miaraka amin'ny fingotra eva
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanamboarana rojo vy goavambe tsara tarehy. Ka ny ankizy lehibe dia afaka manana kojakoja manokana ho an'ny lakileny.
Hevitra hanamboarana boaty fanomezana
Lahatsoratra DIY izay mampiseho safidy isan-karazany amin'ny fanamboarana boaty fanomezana. Hevitra tonga lafatra ampiasaina amin'ny Krismasy, tsingerintaona nahaterahana, Fetin'ny reny ...
Ornament Santa Claus amin'ny fingotra eva
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana haingon-trano Krismasy mahafinaritra ho an'ilay hazo, ary iza koa ankoatr'izay Dadabe Noely malalantsika izay ho avy tsy ho ela.
Hala Halloween miaraka amin'ny mololo
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana hala mahavariana ho an'ny Halloween. Ity dia ho fitaovana tsara haingo an-trano ho an'ity fety ity.
Valaho karandoha miaraka amin'ny fingotra eva
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana rojo karandoha tsara tarehy, tsara ho an'ny fety Halloween. Fitaovana haingon-trano tsara.
Halloween swabs ho an'ny cupcakes anao
DIY lahatsoratra momba ny asa-tananaON amin'ny fomba fanaovana hazo mahatsiravina manaingo ny cupcakes antsika amin'ny fety Halloween.
DIY: brooch Flamenco miaraka amin'ny fingotra eva
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba hanamboarana brooch flamenco mahafinaritra sy mahafinaritra vita amin'ny fingotra eva. Raha tsy miakanjo ianao dia mifandraisa amin'ny Fair.
DIY: Flamenco na gof fofucha
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana saribakoly fofucha miakanjo toy ny Gipsy, izay mifanaraka amin'ny Fair Andalusian mahazatra.
DIY: fofucha kômonio
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanaovana ny fofuchas malaza. Amin'ity tranga ity, iray ho an'ny kômonio, koa ankehitriny amin'ity volana Mey ity.
DIY: Vatana Fofucha
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehonay anao ny fomba fanamboarana ny vatan'ny fofucha, ilay saribakoly malaza vita amin'ny fingotra eva voaravaka araka ny hetsika hisafidianana.